अमरत्वको आर्युवेदिक औषधि (गुर्जो) गिलोयको जरा – Sajha Pati
गिलोय (गुर्जो)का १० आश्चर्यजनक फाइदाहरू
गिलोय (गुर्जो) (टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया) एक आर्युवेदिक जडिबुटी हो जुन युगौं युगदेखि औषधिमा प्रयोग भईरहेको छ । भारत दिल्लीका पोषण विशेषज्ञ डा. अंशुल जयभारतका अनुसार संस्कृतमा, गिलोय (गुर्जो)लाई ’अमृता’ भनेर चिनिन्छ, जसले शाब्दिक रूपमा ’अमरत्वको जरा’ मा अनुवाद गर्दछ, किनभने यसमा प्रशस्त औषधीय गुणहरू छन् । “गिलोय (गुर्जो)को डाँठ अधिकतम उपयोगितामा पर्छ, तर यसको जरा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । डा. अंशुल यसका फाइदाहरू र प्रयोगहरू एफडीएले स्वीकृत गरेको भन्नु हुन्छ । अर्का डा आशुतोष गौतम वैद्यनाथ पनि “गिलोय (गुर्जो)को रस, पाउडर वा क्याप्सुलको रूपमा खपत गर्न सकिने बताउनु हुन्छ ।
गिलोय (गुर्जो)का १० आश्चार्यजनक फाईदाहरु
रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने : गिलोय (गुर्जो) एक विश्वव्यापी जडिबुटी हो जसले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ । यो एन्टिआक्सीडन्टहरूको पावरहाउस हो जसले फ्रिरेडिकलहरूसँग लड्छ, तपाईंको कोषहरूलाई स्वस्थ राख्छ र रोगहरूबाट मुक्त हुन्छ । गिलोय (गुर्जो)ले विषाक्त पदार्थ हटाउन मद्दत गर्दछ, रगत शुद्ध पार्छ, ब्याक्टेरियासँग लड्छ कलेजोको बिरामी र मूत्र पथमा संक्रमणसँग पनि लड्दछ । “गिलोय (गुर्जो)लाई मुटुसँग सम्बन्धित अवस्थाको उपचारमा विशेषज्ञहरूले प्रयोग गर्दछन र बाँझपनको उपचारमा पनि उपयोगी पाइन्छ“।
पुरानो ज्वरोको उपचार गर्दछ : गिलोय (गुर्जो)ले बारम्बार हुने फीवर (पुरानो ज्वरो)बाट छुटकारा पाउन सहयोग गर्दछ । गिलोय (गुर्जो) प्रकृतिमा पाइराइटिक विरोधी भएकाले यसले डेङ्गु, स्वाइन फ्लू र मलेरिया जस्ता जोखिममा पार्ने लक्षणहरू र त्यस्ता लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ ।
पाँचन क्रियामा सुधार गर्छ : गिलोय (गुर्जो) पाचन सुधार गर्न र आन्द्रासँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार गर्न धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
श्वासप्रश्वास सम्बन्धी : गिलोय (गुर्जो) आफ्नो छिटो फाइदाहरूका लागि प्रख्यात छ र श्वासप्रश्वासको समस्या कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
उपचार गठिया : गिलोय (गुर्जो)मा एन्टीइन्फ्लेमेटरी र एन्टीआर्थराइटिक गुणहरू हुन्छ जसले गठिया र यसका धेरै लक्षणहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ । जोर्नि दुखाइका लागि गिलोय (गुर्जो) स्टेमको पाउडर दूधमा उमालेर सेवन गर्न सकिन्छ । यसको अदुवासँग मिश्रणले रूमेटोइड गठियाको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सल्लाह : तपाईले आधा ग्राम गिलोइ (गुर्जो) पाउडर लिन सक्नुहुन्छ केही आंवलाको साथ नियमित रूपमा सेवन वा कब्जको उपचारको लागि गुड़सँग सेवन गर्नुले लाभको नतिजा चाडै पाउन मदत पुग्छ ।
फोर्टिस अस्पतालका डा. मनोज के. आहुजा
मधुमेह उपचार : गिलोय (गुर्जो) हाइपोग्लाइकेमिक एजेन्टको रूपमा काम गर्दछ र मधुमेह (विशेष गरी टाइप २ मधुमेह)लाई उपचार गर्न मद्दत गर्दछ । गिलोय (गुर्जो)को रस रगतमा चिनीको उच्च स्तर चापलाई कम गर्ने कार्य गर्दछ ।
तनाव र चिन्ता कम गर्दछ : के तपाईंलाई थाहा छ गिलोय (गुर्जो)लाई एडाप्टोजेनिक जडिबुटीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यसले मानसिक तनाव र चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्दछ । यसले विषाक्त पदार्थहरूबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ, स्मृतिलाई बढावा दिन्छ, तपाईंलाई शान्त बनाउँछ र अन्य जडिबुटीहरूसँग मिलेर उत्कृष्ट स्वास्थ्य बनाउँछ ।
दमको लक्षणहरूलाई कम गर्दछ : दमको कारण छातीको जकड़न, सासको कमी, खोकि, घरघराहट, इत्यादि हुन्छन् जसको कारणले यस्तो अवस्थाको उपचार गर्न धेरै गाह्रो बनाउँदछ । गिलोय (गुर्जो)को जुस पिउनु दमका बिरामीहरूलाई सासलिन सहयोग र्पुयाउँछ र प्रायः विशेषज्ञहरूले सिफारिस पनि गर्छन ।
दृष्टिमा सुधार ल्याउछ : भारतका धेरैजसो भागहरूमा, गिलोय (गुर्जो) प्लान्ट आँखाका लागि धेरै उपयोगि र लाभदायक मानिन्छ किनकि यसले दृष्टिको स्पष्टता बढाउन मद्दत गर्दछ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने भनेको पानीमा गिलोय (गुर्जो)को पाउडर उमालेरे चिसो भईसकेपछि परेलिकमा लगाउनुहोस् ।
बुढेसकालका लक्षणहरूलाई कम गर्दछ : गिलोय (गुर्जो) बिरूवामा एन्टीएजिंग गुणहरू हुन्छन् जसले काला दागहरू, पिम्पल्स, फाइन लाइनहरू र झुर्री कम गर्न मद्दत गर्दछ । यसले तपाईंले सँधै चाहानु भएको जस्तो सफा र चमकदार छाला प्रदान गर्दछ ।
नोट : त्यहाँ गिलोय (गुर्जो) उपभोग गर्ने कुनै गम्भीर साइड इफेक्टहरू छैनन् किनकि यो एक प्राकृतिक र सुरक्षित जडिबुटी उपचार हो । यद्यपि, केहि केसहरूमा (गिलोय (गुर्जो)को प्रयोगले कब्ज र रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्दछ । त्यसोभए यदि तपाई मधुमेह रोगी हुनुहुन्छ र दीर्घकालीन रुपमा गिलोय (गुर्जो)को सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईको रगतमा चिनीको स्तर नियमित रूपमा परिक्षण गर्नुहोस् । साथै, यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने गिलोय (गुर्जो)को सेवन त्याग्नुहोस् ।-माईहेल्थबाट सम्पादित
चार ठाउँमा सामुहिक मेसबाट वडा १५ मा दैनिक १७ सय ५० जनालाई भोजन, आजबाट अन्नपूर्ण चोकमा पनि राखियो